10 koorsooyinka Bilaashka ah ee Seminarka fiqiga Dallas 2022
10 Dallas Fiqi Seminary Koorsooyin Bilaash ah
Waa adduunyo badan oo suurtagal ah, markaa maahan wax la yaab leh inay jiraan kumaan diin iyo waxbaris. Waxyaabahan ayaa la sii sheegay xitaa ka hor intaan jiilkeennu dhalan. Seminaaro fiqi ahaaneed waxay gacan ka geystaan ​​keenista hufnaanta xaqiiqooyinka iyo ujeedada adduun wareersan sida kuweenna waana taas sababta aad u heli karto koorsooyin bilaash ah oo fiqi ahaaneed oo Dallas ah si aad qalbigaaga uga nadiifiso wixii wareer ah ee maskaxdaada gelinaya.
Si kastaba ha noqotee, Masiixiyaddu waa mid ka mid ah diimaha ugu adag abid maxaa yeelay Ciise Masiix madaxa ugu weyni waa ninka ugu caansan ee abid soo maray Clime.
Tanina waxay noo keeneysaa fiqiga. Fiqiga macno ahaan waxaa lagu qeexaa barashada Ilaah, ama ilaahyada, iyo run ahaanshaha diinta.
Waxaa jira waxyaabo badan, caqiidooyin, qaabab, fikrado, caqiidooyin, diimo adduunka maanta ka jira oo maskaxdaada qarxin doona oo aad bilaabi doontid inaad la yaaban tahay sida waxyaalahan ay u soo bilowdeen oo ay maanta ugu dhex bateen.
Tani waa sababta siminaaro fiqi ahaaneed iyo kulleejooyin maanta halkan u joogaan; inuu u sheego injiilka masiixiga siduu rabo, inuu ka caawiyo ragga inay baabi'iyaan caqiidooyinka beenta ah ee aan haysan kaydinta dhabta ah ee Baybalka, caqiidooyinka wasakheeya qalbiga dadka isla markaana maskaxdooda ka weeciya Masiixa la doortay, Masiixa sara kacay.
Kadibna, seminary fiqi ahaaneed ee Dallas waa mid kamid ah seminaaro la fasaxay oo kaqeyb galiyay rag badan oo awood leh oo ilaahay ah, rag looxooray inay noqdaan kuwa dib usoo nooleeya aduun jaban, raga ka caawiya ragga inay maskaxdooda lawareegaan masiixa oo ay raacaan sida uu dalbado iyagoo ka tagaya damacyada dunida oo dhan iyagoo indhaha saaraya iskutallaabta lagu dhaafay dembidhaafkeenna.
Weligaa waad wareersan tahay oo waxaad xiiseyneysaa inaad si qoto dheer uga dhaadhacdo Ilaah iyo diinta, markaa koorsooyinka bilaashka ah ee fiqi ahaaneed ee Dallas ayaa la heli karaa si ay kuu tilmaamaan waddada hufnaanta iyo fahamka qotada dheer.
Waxaa jira koorsooyin bilaash ah oo Dallas fiqi ahaaneed oo Dallas ah oo aad qaadan karto waxaanan waqti u helnay inaan halkan kuugu taxno qaarkood. Marka halkan!
Koorsooyinka Seminary ee Dallas fiqi ahaaneed
Ma aamini kartaa Baybalka
Sida loo akhriyo Kitaabka Quduuska ah sida Seminary Professor
Magacyada iyo dhinacyada Eebbe
Fahamka Ballanqaadyada Eebbe
Dallas Seminary Seminary FAQs
Waa maxay caynkee ah Seminary fiqiiga Dallas?
Tarjumaad noocee ah ayuu Seminary Seminary Dallas u adeegsadaa?
Seminary fiqi ahaaneed ee Dallas ma adag tahay in la galo?
Immisa ayey ku kacaysaa Seminary Seminary Dallas?
Miyaad aamini kartaa Kitaabkaaga Quduuska ah?
Sida loo akhriyo Kitaabka Quduuska ah sida borofisar Seminary ah
Kani waa koorso cusub oo aad u xiiseyn karto, qaasatan haddii aad dareentay hoos udhac iyo aamusnaan ku saabsan caqiidadaada Masiixiyiinta ah. Kani waa mid ka mid ah koorsooyinka bilaashka ah ee fiqi ahaaneed ee Dallas ee kugula socon doona caqabadaha wadaagista waxyaabaha aad aaminsantahay iyo badbaadintaada dadka kugu hareeraysan, gaar ahaan adduunyo badan oo xumaan ah.
Waad ku jajabnaan kartaa wax kasta oo hareerahaaga ka dhacaya oo waxaad dareemeysaa miyir-qab laakiin laakiin waxa kaliya ee aad sameyn karto si aad uga caawiso adduunka waa tukashada iyo inaad ka dhigto qof walba oo hareerahaaga ah inay rumaystaan ​​Ciise Masiix oo aan ku haysanno nabad buuxda.
Koorsadu waa koorso toddobo kulan ah oo uu baray Dr. Barry Jones oo indhahaaga u furi doona aragti guud ee wacdinta Masiixiyiinta.
Waxaa jira dad badan oo shaki ku jiro Kitaabka Quduuska ah maanta. Aad u badan!
'Miyaad aamini kartaa Kitaabka Quduuska ah' waa koorso sideed toddobaad ah oo ka mid ah koorsooyin kale oo bilaash ah oo fiqi fiqi ah oo Dallas ah. Waxaa wax baraya seddex ka mid ah macallimiinta / aqoonyahannada ugu qadarinta badan Seminary-ka.
Koorsadani waxay ku bari doontaa taariikhda Kitaabka Qudduuska ah, sida loo keliyeeyay, indhahana u kala qaad in aad gebi ahaanba u aammini karto iyo inay tahay ereyga Ilaah ee aan dhammaanayn.
Baybalku wuxuu diiwaan geliyaa ficillo badan oo ka sarraysa Ilaah oo maskaxda caadiga ah ee aadanuhu si fudud isku hallayn karin marka laga reebo muujinta Ruuxa Quduuska ah. Tani waa dalab aad dhif u ah oo qalbigaaga looga nadiifiyo wax kasta oo shaki ah oo aad maskaxdaada uga dhigto waxtarka ereyga Ilaah.
Weligaa miyaad lumisay isku dayga inaad qabsato ugu yaraan aragti ah waxa marinka Baybalka ka hadlayo? Waa hagaag, Masiixiyiin badan ayaa ku dhacay dhibaatadaas maanta maxaa yeelay Kitaabka Qudduuska ah ma aha oo kaliya in loo barto sida sheeko cusub, haddii aysan sidaas ahayn markaa Masiixiyiin badan ayaa si dhammaystiran u akhrin lahaa Kitaabka Quduuska ah oo dhan, iyo sida aad si fudud ugu sheegi karto sheeko ka kooban cutubka koowaad illaa kan ugu dambeeya, markaa way sahlanaan lahayd in Kitaabka Quduuska ah sidaas loogu sheego sidoo kale.
Si kastaba ha noqotee, fududeynta awoodda si wanaagsan loogu akhriyo Kitaabka Quduuska ah waa mid ka mid ah koorsooyinka bilaashka ah ee cilmiga fiqiga ee Dallas, kaas oo loo yaqaan 'Sida loo akhriyo Kitaabka Quduuska ah sida Seminary Professor'. Koorsadani waxay socotaa barnaamij afar toddobaad ah waxaana wax ka dhiga Dr. Howard Hendricks (1924-2013) oo ka mid ah macallimiinta loogu dabaaldego taariikhda seminary fiqiga ee Dallas.
Koorsadani waxay kugu qalabeyn doontaa farsamooyin awood leh oo aad ku barato ereyga Eebbe sida Dallas aqoonyahannada fiqiga ah ee cilmiga fiqiga inta lagu guda jiro waxbarashadooda shaqsiga ah.
Sannado badan, saynisyahannadu waxay iskudayeen inay ogaadaan sida noloshu ku timid. Iyaga oo raadinaya jawaabo, in badan oo ka mid ahi waxay la yimaadeen aragtiyo iyo mala-awaallo kala duwan oo ku saabsan sheekada abuurista iyo asalka nolosha.
Seynisyahankii, Charles Darwin wuxuu xitaa soo jeediyay aragtida Evolution oo in muddo ah umuuqatay mid suuragal ah illaa mala-awaal gaar ah oo uu sameeyay loo arkay been.
Uma baahnid inaad ku jahwareerto oo aad u jeceshahay jawaabaha markaad si fudud maskaxda ugu nadiifin karto mid ka mid ah koorsooyinka siminaarka fiqi ahaaneed ee Dallas ee cinwaankeedu yahay Genesis.
Bilowgii wuxuu ku bari doonaa sheekada abuurista iyo aabbaha oo wuxuu kuu sharxi doonaa wax kasta oo aad waligaa ku aragtay wareer buugga Bilowgii. Seminary-ka fiqiga ee Dallas, waxaa wax ka dhiga Dr. James Allman, oo ah borofisar ka socda Dallas Theological Seminary daraasado axdi hore ah.
Injiilka Yooxanaa waa buug aad u xiiso badan oo Kitaabka Quduuska ah oo Masiixiyiinta qaar ay xitaa khariideeyaan waqti gaar ah oo ay si weyn ugu bartaan. Sida caan ku ah, mawduuca injiilka Yooxanaa waa Ciise Masiix sidaa darteed barashada injiilka Yooxanaa wuxuu la mid yahay barashada Masiixa.
Ciise Masiix wuxuu ugu yeeray Yooxanaa gacalisadiisa sidaa darteed wuxuu u ekaaday sida cunugga / xertiisa oo jecel sidaa darteed waxa macnaheeda kuu ah inaad aqriso injiilka Yooxanaa ayaa ah inay u egtahay aqrinta injiilka xertiisa uu jecelyahay taas oo ah dariiqa lagu xoojinayo xiriirkaaga iyo Masiixa sara kacay . Waxay socotaa muddo siddeed toddobaad ah waxaana baraya Dr. Mark Bailey Dallas Chancellor Seminary Chancellor.
Magacaabistu maahan oo kaliya wax dhaca iyadoo aan la helin dhacdooyin gurmad ah. Marwalba waxaa jira waxyaabo sababa, sida marka lamaanaha ay kudhacaan waqti adag oo ah inay dhalaan cunug marka cunuggu dhasho, cunuga waxay u egtahay inuu noqon doono kadib dhacdooyinkii taxanaha ahaa ee dhacay kahor intuusan isagu / iyadu dhalan ka dibna laga yaabee mucjisada dhaqaaqo Eebbe markuu badbaadiyo ama u muujiyo iyaga.
Waxay la mid tahay magacyada ilaahay, magacyada ilaahay waxay hayaan dhowr waxyaalood oo qarsoon oo ah ahaanshihiisa kuwaas oo aan kaliya kuu furanayn inaad aragto mooyee adigu shakhsi ahaan markhaati uma aha.
Magacyada iyo Dhinacyada Eebbe waa mid ka mid ah koorsooyinka bilaashka ah ee Seminary Dallas Fiqi ahaaneed ee aad ka heli karto bogga Dallas Fiqiga Seminary. Waa koorso shan kal-fadhi ah oo uu baray Dr. Scott Horrell. Waxay sii qoto dheereyn doontaa aqoontaada Eebbe waxayna indhahaaga u fureysaa in badan oo ka mid ah astaamaha muujinta sifooyinka Ilaah ee aan la wadaagi karin.
Buugga Tesaloniika ku dhex jira baybalka waa buug awood badan. Waa buug ku siin doona iimaan, rajo, iyo kalsooni xagga Eebbe ah in kasta oo adduunyo waalan, haddana Ilaah weli jecel yahay kuwiisa oo had iyo goorna nabaddiisa iyaga siin doono.
Tesaloniika waa mid ka mid ah koorsooyinka bilaashka ah ee Dallas fiqi ahaaneed ee fiqi ahaaneed ee loo heli karo qof kasta oo u ooman dhiirrigelinta Ilaah si uu ula macaamilo arrimaha maalinlaha ah ee maskaxda weligeed ah ee adduunka burburay.
Waxaa wax baray Dallas Theological Seminary President iyo borofisar ku takhasusay Baybalka Dr. Mark M Yarbrough.
Kitaabka Qudduuska ah oo dhan, axdiyadu aad bay Ilaah u jecel yihiin oo hal shay oo ka caawiyey reer binu Israa'iil inay ku guuleystaan ​​dhibaatadooda waa axdiga Ilaah iyaga la dhigtay dartiis. Ilaah ballan buu u qaaday Dadkiisa oo sida muuqata waa Ilaah ballan qaad ah sida uu isagu yahay ilaah axdiga dhawra.
Koorsadani waa mid ka mid ah koorsooyinka Seminary Dallas ee fiqi ahaaneed ee soconaya lix toddobaad oo keliya. In kasta oo muddada aan loo dhigmi karin heerka sare ee saameynta ee uu heli karo qof kasta oo qaata koorsadan. Koorsadani waxay indhaha u furaysaa Ilaaha aan u adeegno.
Ciise Masiix wuxuu lahaa nolol cajiib ah! Bal ka fikir hal nin oo dunidan ku tuntay dambi la’aan! Ka dib markii uu ogaaday cadaawayaashiisa inay yihiin, ayuu u duceeyey iyaga oo xataa u oggolaaday midkood inuu Yuudas Iskariyod raaco inuu raaco oo uu iska dhigo nin xer ah.
Koorsadani waa koorso uu qof kasta oo Masiixi ah u baahan yahay inuu si xamaasad leh u doonayo, waxay ballaarin doontaa maskaxdaada iyo fahamka ereyada iyo shuqullada Ciise Masiix markaad ku dhex socoto reer binu Israa'iil adoo indhahaaga maskaxda ku haya meelihii Ciise Masiix ku socday, iyo waxyaalihii uu sameeyey, iyo sida uu iyaga u sameeyey. Waa koorso sagaal toddobaad ah oo uu baray Marxuum Dr. J Dwight Pentecost oo dhaafiyay 2014.
Koorsadan Bilaashka ah ee Fiqi Fiqi Dallas waa la heli karaa halkan
Sheekada Qorniinka waa sheeko yaab leh. Si kastaba ha noqotee, fahamkeenna ku saabsan luqadda Ingiriisiga oo ah ku dhowaad luuqad guud oo ay kumanaan qof oo adduunka oo dhan ah ka akhriyaan qorniinka ayaa leh hab saameyn ku yeelanaya fahamka Qorniinka.
Kani waa mid ka mid ah koorsooyinka bilaashka ah ee fiqi ahaaneed ee Dallas oo indhahaaga u furi doona qaab dhismeedka Kitaabka Quduuska ah, saameynta luqadda Ingiriisiga ee fahamkeenna Qorniinka iyo barta ugu muhiimsan ee aayad kasta oo ku jirta.
Kitaabka Quduuska ah waa buug aad u qurux badan oo ka kooban dhammaan gabayada, taariikhda, waraaqaha, xikmadda, iyo sabuurrada haddana dhammaantood waxay tilmaamayaan hal qof. Tani waa mid muhiim noo ah inaan fahamno si aynaan u fasirin Kitaabka Quduuska ah iyadoo lagu saleynayo kaliya aqoonta madaxa.
Waxay socotaa muddo saddex iyo toban toddobaad ah waxaana wax ka dhigaya Dr. Mark Yarbrough - Madaxweynaha Dalladda Fiqiga ee Dallas.
Haddii aad rabto inaad fahanto mid ka mid ah liistada hoos ku qoran, markaa koorsadani waa adiga!
Qisada abuurista ee laga helay Bilowgii 1-11
Axdigii Muuse iyo inta kale ee Shanta ah ee ku xigta Bilowgii
Boqortooyada Axdiga gaar ahaan axdigii Daa'uud.
Seminary fiqiga Dallas waa Seminary aan madhab ahayn oo ku yaal Dallas Texas oo leh xarumo iyo goobo goboleed oo ku baahsan Mareykanka iyo adduunka.
Waxaa la aasaasay sanadkii 1924, halkudhigga Seminary-na waa run baro, Jacaylka sifiican.
Waa iskuul Seminary evangelical ah.
Seminary fiqi ahaaneed ee Dallas kuma koobna oo keliya tarjumaadda Kitaabka Quduuska ah. Macallimiinta, aqoonyahannada iyo ardeyda wax ka barta Seminary waxay adeegsadaan mid ka mid ah tarjumaadaha noocyada Baybalka Ingiriisiga oo ay ku jiraan: New International Version (NIV), the New King James Version (NKJV), New Living Translation (NLT), The Message (TM), the Cusbooneysiinta New American Standard Bible (NASB), the English Standard Version (ESV), the International Children's Version (ICV), the New Century Version (NCV), the Holman Christian Study Bible (HCSB), iyo NET Bible.
In kasta oo ay tahay inaad ogaato inaysan dhib ahayn in la galo Dallas Fiqiga Seminary, sidoo kale waa inaad ogaataa inaysan fududayn sidoo kale.
Haddii aad rabto wax waxaad u shaqeyn doontaa si adag, laga yaabee marka dabiiciga loo eego dhacdooyinka, waxay umuuqan kartaa wax adag laakiin shaqadaada adag iyo adkeysigaaga ayaa kuu hadli doona. Waxaad ubaahan doontaa dhibcaha SAT qiyaastii 3.15 waxaadna runtii ubaahan doontaa inaad maskaxdaada ku dhex tuujiso oo aad si adag u shaqeyso. Waad samayn kartaa!
Celcelis ahaan, kharashka waxbarashada Dallas Theological Seminary wuxuu ku saabsan yahay $ 17,130.
8 Xaqiiqooyin cilmiyaysan oo Kitaabka Qudduuska ah Weligaa Ma Ogid!
17 Koorsooyinka Kitaabka Quduuska ah ee Bilaashka ah ee Bilaashka ah oo leh Shahaadada dhammaystirka
75 Su’aal Oo Ku Saabsan Ilaah iyo Kitaabka Quduuska ah oo aan laga jawaabi karin
Koorsada IELTS ee ugu Fiican ee Bilaashka ah oo ay Bixiso Jaamacadda Queensland, Australia
Previous Post:Sida loo Dalbo Jaamacada Kanada - Tilmaamaha Talaabada Tilmaamaha
Post Next:Sida loo Codsado Oo Loogu Guuleysto Deeqda waxbarasho ee 'Vanier Canada Graduate Scholarships'
Pingback: 5 Talaabo oo aad ku heli karto Qadka tooska ah si aad u qabato Aroosyada 2022